अफिसमा काम गर्दा निन्द्रा लाग्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय - DURBAR TIMES
HomeLife Styleअफिसमा काम गर्दा निन्द्रा लाग्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
अफिसमा काम गर्दा निन्द्रा लाग्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
काठमाडौँँ । रातमा पर्याप्त निद्रा पाइसकेपछि पनि, के तपाइँ अर्को दिनमा अफिसमा काम गर्दा ‘हाई र निद्रा’ महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ? यदि हो भने, त्यहाँ यसको लागि धेरै कारणहरू हुन सक्छन् । जुन कारण यदि थाहा भयो भने, तपाईं कुनै पनि समयमा निद्राको समस्याबाट बच्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, कार्यालयमा सुत्नुका ४ कारणहरू जान्नुहोस् :-
१) कामको समयमा कम पानी पिउनु पनि एक समस्या हो । शरीरमा पानीको अभावका कारण, व्यक्ति चिढ्चिढापन र थकित महसुस गर्न थाल्छ जसको फलस्वरूप पनि निद्रा सुरु हुन्छ।
२) यदि तपाईलाई एनीमिया छ, अर्थात्, शरीरमा फलाम वा भिटामिनको अभाव छ भने त्यसले रातो रक्त कोशिकाहरू सिर्जना गर्दछ । तब यी रातो रक्त कोषहरूले तपाईंको फोक्सो मार्फत शरीरमा अक्सिजन बोक्छ । जब ती कमी हुन्छन्, शरीरका अंंगहरुमा अक्सिजन पुर्‍याउने काममा अवरोध आउँछ। र निद्रा महसुस गर्न थालिन्छ ।
३) यदि तपाईं डिप्रेसनबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने पनि तपाईंलाई निन्द्रा लाग्छ। जब तपाईं दु: खी र निराश हुनुहुन्छ भने कमजोर र थकित महसुस गर्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा दुईवटा सर्तहरू सिर्जना हुन्छन् । एक कि त तपाईलाई धेरै निन्द्रा लाग्छ । अर्का तपाईंलाई निन्द्रा लाग्दैन ।
४) यदि तपाईं अफिसको अन्तिम रात वा अन्य रात पनी सुत्नु भएन भने, तपाईं अफिसमा निद्रा महसुस गर्नुहुन्छ।
Previous articleराष्ट्रिय एकता अभियानको आरोप :संसद विघटनको मुख्य कारण चिनियाँ हस्तक्षेप
Next articleमेस्सीको कीर्तिमान, तोडे पेलेको रेकर्ड